50 arrimood oo lagu gaaro guur farxad leh. Qaybta 1-aad | Somaliska
La soco qeyta 2-aad.
Halkan waxaan ku soo gudbineynaa tilaamaha ay leedahay marwada wanaagsan:
1- Inay tahay qof wanaagsan , Rabbi ka cabsata kor iyo hoos,
Rasuulka raacda (scw).
2- Waa daaciyad diinta ugu baaqda ninkeeda, gurigeeda, ehelkeeda,
dariskeeda, saaxiibadeed iyo bulshada inteeda kale.
3- Waxey ninkeeda uga dambeysaa mas’uuliyadda ama hogaanka
4- Uma dareento culays inay ka amar qaadato ninkeeda wixii aan
5- Waxey xifdisaa ( ilaalisaa) nafteeda, hantida ninkeeda iyo
6- Inay buuxiso indhihiisa ama uu maqsuudo marka uu soo eego
( jirkeeda, nafteeda iyo caqligeeda), ma dhibto ninkeeda.
7- Waxey aaminsan tahay in gurigeeda adduunku yahay kii looga sii
gudbilaaha guriga jannada.
8- Waxey ilaalisaa ishiisa, sankiisa, dhegahiisa iyo qalbigiisa.
9- Way u dulqaadataa dabeecadaha xun ee ninkeeda, waxay
ogtahay inuu meelo kale ku wanaagsan yahay.
10- Waxey dabooshaa baahida gogosha ee ninkeeda, xilliga uu rabo
iyo qaabka uu u rabo.
11- Ninkeeda ayay xasuusisaa ducada galmada hadduu halmaamo.
12- Saaxiibadeed uma gudbiso ama ugama sheekeyso ninkeeda ama
xiriirka dhex mara labadooda.
13- Waa midaan ku dagmin quruxdeeda, cilmigeeda, shaqadeeda,
waxaas oo dhan waa geed hadhkii.
14- Ma ogola in dibadda laga maqlo haddii khilaaf ku yimaado
15- Waxey ogtahay in bidcada, sixirka, waxsheegyada iyo
falanfalawyada oo loo tago ay keenaan burbur diimeed iyo mid
16- Haddii uu baxayo way sagootisaa iyada oo adeegsanaysa erayo
faraxgaliya, haddii uu soo laabto waxey u soo dhaweysaa sidii
qof marti ah.
17- Waa mid aan ka bixin guriga idan ama fasax la’aan.
18- Waxey ka fogaataa waxa abuura shakiga.
19- Guriga ma soo galiso fasax la’aan qof aan ahayn maxaarimteeda
haddii ninkeedu maqan yahay.
20- Raggu waxey jecel yihiin marwada dhoolla cadeysa had iyo jeer.
21- Akhlaaqdeeda iyo edebteeda tusaale wanaagsan ayay u yihiin
22- Inay Rabbi u mahad naqdaa siinta uu siiyay nin ay nafteeda uga
dhowrsato xumaanta, awlaadna ay ka heshay.
23- Inay leedahay akhlaaq aad u sarraysa.
24- Jilbaabka kuma siibto ama kuma furto meel aan ahayn guriga
25- Cawradeeda ma dhaalacdo qof aan ahayn ninkeeda.
26- Codka kor uguma qaado haddii ay wada hadlayaan.
27- Waxey ogtahay in afar wax albaabada jannada loogu furo:
salaadda, soomka, adeecidda ninkeeda iyo xifdinta jirkeeda.
28- Inay tahay saabirah u adkeysata wax la’aanta ninkeeda ama ay
tahay shaakirah haddii ninkeedu xoolo leeyahay.
29- Inay ninkeeda ku dhiirri galisaa xiriirinta waalidkii, qaraabadiisa
30- Waa inay tahay marwo jecel khayrka, kuna dadaasha baahintiisa.
31- Waxaan run ahayn afkeeda ma yaqaan, beenta waa laga
32- Xushmad iyo astur ayay guriga kaga baxdaa, wey laabtaa
indhaheeda, kor uma eegto ragga kale.
33- Caruurteeda waxey bartaa jaceylka Allah (swt) iyo Nabiga( scws),
ixtiraamka iyo u dhago furnaanta aabbahood.
34- Qalbigeedu ma yaqaan caro iyo ficillo haddii ninkeedu ku
35- Ma xaqirto, kuma jeesjeesto uunka Rabbi dhammaan.
36- Aad ayay uga fogtahay kibirka, faanka iyo isla waynaanta.
37- Ma aha reero adduunyo, had iyo jeer waxay ka fikirtaa aakhiro iyo
Rabbi la kulankiisa.
38- Arrimaheeda dhammaan Rabbi ayay u tala saarataa, uma carooto
Rabbi waxa uu uqadaray.
39- Waxey xifdisaa Rabbi waajibaadkiisa, kana fogaata Rabbi waxa
40- Waxey ogtahay in ninkeedu yahay sayidkeeda, sida Rabbi
quraanka noogu shegay.
( ÞÇá ÊÚÇáì : æÃáÝíÇ ÓíÏåÇ áÏì ÇáÈÇÈ . ÓæÑÉ íæÓÝ )
41- Waxey ogtahay in ninkeeda xaqqiisu ka weyn yahay xaqqa ay
iyadu isaga ku leedahay.
42- Waa midda qirata khaladkeeda, cadeysana sababaha keenay.
43- Carrabkeedu kama daalo xuska Rabbi iyo kalimada wanaagsan.
44- Ma sheeg sheegto waxa ay ninkeeda siiso, mana soomto sunno
fasax la’aan, xishood ayaa hibo loo siiyay.
45- Waa midda og iney xaraam tahay in ninka la weydiisto furriin
( dhalaaq ) sabab la’aan.
46- Dalabka ninkeeda way ka hormarisaa dhamaan dadka, xataa
47- Iskuma ekaysiiso ragga, dumarka gaalada ah ama kuwa liita.
Waxey ku dheereysaa sida ninka loola cayaaro.
( ÞÇá ÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã áÌÇÈÑ ÑÖí Çááå Úäå : åáÇ ÌÇÑíÉ ÊáÇÚÈåÇ æÊáÇÚÈß )
48- Jaceylka waxaa kor uqaada in galmada ka dib halmeel lagu wada
ÞÇáÊ ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇ : ßäÊ ÃÛÊÓá ÃäÇ æÑÓæá Çááå Õáì Çááå Úáíå æÓáã ãä ÇáÌäÇÈÉ ãä ÅäÇÁ æÇÍÏ ÊÎÊáÝ ÃíÏíäÇ Ýíå. )
49- Hantida ninkeeda ma bixiso fasax la’aan.
50- Waxey taqaanaa cuntada uu jecelyahay ninkeeda iyo dookhiisa.
51- Allah ayaa hibo u siiyey sida loola dhaqmo ninka.
52- Waa marwo cibaado badan, ninkeedana ku taageerta cabsida
53- Waa iney ninka dareensiisaa qiimaha uu agteeda ku leeyahay,
aadna uga fikirto umuurihiisa, taasi waxey soo jiidaa dareenkiisa,
haddii uu u arko inay iska indho tireyso wuu ka sii fogaada.
54- Caloosha kuma qaado khaladaadka yaryar ee ninkeeda, had iyo
jeer waxey xasuusataa barismaadkii iyo wanaagii ay isla soo
55- Waxey u muujisaa ninkeeda ixtiraamka ay u hayso eheladiisa,
way ammaantaa, u ducaysaa isaga oo arkaya ama maqlaya, taasi
waxey keentaa iney qabligiisa hanato.
56- Waxay la qabysataa ninkeeda daalka iyo tacabka shaqadiisa iyo
57- Codkeeda, cagteeda, calaladeeda iyo dhammaan nolosheeda
waxey u carbisay khidmada ninkeeda.
58- Ninkeeda ayey doorataa haddii ay is qabtaan bulshada inteeda
kale, xataa waalidkeed.
59- Ma ammaanto ragga kale ninkeeda hortiisa, taasi waxay ninka ku
abuurtaa masayr ama hinaase, laakiin xagga diinta way dhihi
kartaa hebel waa sheekh wanaagsan.
60- Ma baahiso sirta ninkeeda iyo arrimihiisa khaaska ah.
61- Ninka ayey shaqo ka dhigataa xilliga uu joogo guriga, isaga ayey
akhrisataa sida joornaalka, dhageysataa sida idaacadda,
daawataa sida TV.
62- Haddii hadalku luul yahay aamusnaantu waa dahab, waa marwo
hadal yar, ma aha mid tororog badan.
63- Waqtigeeda kuma disho xan, namiimyo, heblo waxey tiri iyo
waxaa la sheegay.
64- Waqtigeeda waxey u qaybisay saddex:
65- Rabbigeeda, Raaskeeda iyo Rafiiqeeda (ninka).
66- Waxaa qiimo la leh fikradda ama ra’yiga ninkeeda.
67- Labiska iyo muuqaalka wacan ee ninka waxay bulshada u
gudbiyaan gurigiisa waxa ka jira, sidaa darted il gooni ah ayay ku
68- Shaqaalaha guriga kuma dhowrato howsha ninkeeda.
69- Ma ogola in ninkeeda cid kale u adeegto, mana cuno cunto
aysan iyadu soo kontoroolin.
Fikrad lala dhacay 28 3
mansha allaaaaaah ala ya xifday
CIID WANAAAAAAAAGSAN ,.. , ALFA MABUUK.
Allaha ciidaan mida xigta naga saaro dhibka iyo Qaxootiga , wadankeeniina kuwa si saamiya ugu wada ciida Allaha naga dhigo Aamin….
ASC CIID WANAAGSAN KULU CAAM WA ANTU BIKHEYR DHAMAAN MUSLIMIINTA MEELKASTA OO AY JOOGAAN DALKA IYO DIBADA WAXAAN ALAHA AWOODA LEH KA BARYAYAA INUU DALKEENA NABAD WAARTA NOOGA DHALIYO INSHA ALAAH SANADKAN IYO CIIDAAN CIIDEEDA KALANA BASH BASH IYO BARWAAQO CIMRI DHEER IYO CAAFIMAAD CIBAADO SUUBAN NAGU GAARSIIYO aaaamiiiin
1..Waqti kala qaata. In aad wada joogtaan 24 saac caafimaad kuma jiro. Waxaa wanaagsan dhowr saacadood ama dhowr maalmood in aad kala maqnaataan si aad isugu xiistaan. Waqti badan oo la kala maqnaadaa dhinaca kale uu dhaawacaa guurka.kkkkkk yaab badaan Somalidu talo xuma Guur farxad leh iyo nolol wanagsan waxa lagu dhista wada jir la iskama helo nolosha wanagsan imaan iyo islaanimo dacad ah aa lagu gara been iyo iska hadal iyo diin iska shegasho ah ne waay nagu filan tahay waxay Somalida ka goysay hada ne taalo kala dheerada ah mala kenay kk.. Xaska farxad kula nolada oo ixtirama oo qimeya o haday idin adecan waaxad ku xujesan ha samynina sarirta mel an ahayn ha uga hajirina Rasuulka CSW aye ka mid ahayd Dar daranka u raga kala dardar mayay dumarka ay qaban inay wanag kula dhaqman masuulna ka yahin xaqafaran xumantane ka reban manta ne waa aragtan wax masula ame xaqa is fara way yar yahin ame ma jiranbo wano kale keen kher hele
Ahmed cumar. masha Allah walal wax wanagsan waa so qortay lkn dhibka na hesta waxa naga maqan dhaqanki qoralka wano fudud yahay iyo hadalka lkn Diinta iyo ku dhaqanka way nagu yar yarin waxa lagu dhahay Ninka islamka ah gabdha kheery u dardarma waniyo wanaga fara ayaysan ka baxin guriga codkeda ayaysan maqlin dadka dariska ha ku sugnato guriga gabdhaa muslimada ah manta ne qar an salada Dukan aa is qaba misne carur iyo nolol ka dhexesa mid midka kale wax wanag ah farane ma laha waxayne u hestan inay nlosha ugu danbesya ku nol yahin marka walal wanaga lagu shega iska ma so dege ma aragtay Nin hesta sunadi Rasuulka CSW nagu waniyay ku dhaqmayo wa may Wadanka Dumarka joga inay carur dhasha xolaha si wanagsan u hesa kaliya lo gursada inay insan tahay oo biri la waydinane lama oga gobalada qarne wa la dila dumarka hada xuman uga baqata waniya aqalka dhinac ka sexo haday inta ku wana qada wayday u gacan qada wajigane ha ku dhufanina dhibato ne ha u gesana ya ku dhaqma walal sunadi Rasuulka CSW kuwa magalo jogay ayaga qaday masulidi ninka waa kuwa jidka la tagan jadka waxay waysay nin astura nafteda kuwi wadanki ka so baxayne wad aragta wax wanaji aye jidka uga dhumen Ragine masuliyadi way dhiigen kuwa wadanka jogane Islaamka wan iska shegana Rasuulka CSW ne wano kama qadan Sunadine ugama dayaan kamane racin wax wanag ah wayo Somalia Dumarka iyo Caruurta ba lama siyo xaqa marka wadan galo la imaday ne way ku dayacmen xaqa donta inte lahayen aye jid qaldan qaten qoralka iyo hadalka ad ugu fudud Somalida inay wax ficil ah sameyan Allah yahdina insha Allah
mashaa,laah waxaad soo qortay hadal aad u wanaagsan oo ah mid diin iyo sharaf xambarsan laakin waa ku adagtahay gandha aad u badan arinkaas hadii lagu dhaqmi lahay arinkaas waa arin aad u ah cajiiib ilaah ha usiyaadiyo intii wajibkaas kudatay intii dayacdayna allaha tusiyo intaa ayaan uga baxayaa
November 7, 2011 at 16:48
Ciid wanaagsan dhamaan!!!
Magaca...abdifatah kheyr jecel says:
asalaamu calaykum ,dhamaan aad baad u mahadsantihiin gaar ahaan jimcaale walaal 100% baad ku mahadsantahay wararka kala duwan iyo qoraalada aadka uxiisaha badan aad noo soo galiso webka ,aad baan u aqristaa webkaan runtiina igama ahan amaan aan adiga kugu amaanaayo balse wax badan oo faa’ido mid aduun iyo mid aaqiraba waan ka helaa webkaan marka ku dadaal had iyo jeer runta iskana hubi wararka inta aadan soogalin intaas baan ku darsan lahaa fikirkeeyga mida kale raali noqda akhiyaarta sharafta leh mowduuca guurka aad baa loo wada xiiseenaa ee ruux walbo ka shaqey sida dhalin yarada guur doonka ah loogu sahli lahaa guurka iskuna doorta diin kana fogaada aqlaaq xumada mahadsanidiin dhamaan ,asc
ASC WR WB WAA KU MAHADSAYAHAY WALAALKA MAQAALKAN GALIYAY WAQTIGIISA.
HADII AAN KA HADLO WAXAN KA QABO SHAQSI AHAAN WAXAAN DHIHI LAHA UMADA SOMALIYEED EE MUSLIMKA AH WAXWALBO OO KOONKAAN SAARAN KU ABUURAN LAGU ISTICMAALO DIINTEENA SUUBAN QURAAKA KARIIM IYO AXAADIISTA NABIGEENA SALAWATULLAH WASALAMUHU CALAYH AA LAGA HELAA WA WAX WALBO OO NAFSAD AHAANTADA KU WANAGSAN DIINTEENA KAAMILA OOO WAXWALBO KU JIRAAN EE FADLAN AAN KA FAAIDAYSANO OO WAXYAABAHAN SHAQSI FIKIRKIISA WAQTI BADAN YAANAN KU LUMIN
Asc. dhamaantiin marka xigta ciid wanaagsan intaa ka dib waxaan idin waydiin lahaa inan astaamahaa fiican ee la soo sheegay leh ma laga helayaa Sverige? Haday jawaabtu tahay haaa ila soo xidhiidha hadii kalena waan samraynaa ilaa …….
dhiesow cade says:
mansha waa ra yi fican arinkas